ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘယ်နေရာကပဲလာလာ Grab စီးလာရင် ကျသင့်ငွေကိုရှင်းပေမယ့် iSure
5 Jun 2018 . 3:40 PM
iPhone ၊ iPad ၊ Mac အသစ်ဝယ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ iPhone ၊ iPad ၊ Mac တစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ ပြုပြင်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတော့ မဖြစ်မနေသွားရတော့မှာပါ။ နေပူမိုးရွာရာသီဥတုနဲ့ ကားလမ်းတွေပိတ်နေတဲ့အခါ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားဖို့က တော်တော်လေးစဉ်းစားရပါတယ်။
အဲဒီလိုစဉ်းစားရတာတွေကို အခုအချိန်မှာခဏမေ့ထားလိုက်နိုင်ပါပြီ။ သင့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ဆိုင်ကိုလာနိုင်စေမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုကို iSure ကစတင်လိုက်ပါပြီ။ iSure ကတော့ Apple Device တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ One-Stop Apple Service Center တစ်ခုပါ။ Apple ရဲ့ Guideline အတိုင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Apple Device တွေအတွက်လည်း Accessory တွေကို iSure မှာဝယ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီတော့ iSure ကိုသွားမယ်ဆိုရင် Grab လေးငှားပြီး သက်တောင့်သက်သာနဲ့ထိုင်လိုက်သွားယုံပါပဲ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘယ်နေရကပဲငှားငှား သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးစီးနင်းခဲ့တဲ့ Drop Off မှာ iSure ဖြစ်နေရပါတယ်။ သင်စီးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် ကားခကျသင့်ငွေကို Screenshot ရိုက်ထားပါ။ iSure ကိုရောက်လို့ iPhone ၊ iPad ၊ Mac တစ်ခုခုဝယ်ပြီးရင် ဒါမှမဟုတ် Apple Device ပြုပြင်တာလုပ်ပြီးလို့ ငွေရှင်းတော့မယ်ဆို သင်စီးလာခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွက် ကျသင့်ငွေ Screenshot လေးပြနိုင်ရင် iSure က ယာဉ်စီးခကို ကျခံရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Promotion အစီအစဉ်ကတော့ June 30th အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ Grab ရိုးရိုးပဲပါဝင်တာဖြစ်ပြီး Grab Taxi Plus များကတော့ ဒီ Promotion အစီအစဉ်မှာ အကြုံးမဝင်ပါဘူး။ iSure ရဲ့လိပ်စာကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
iSure (NAKZ Service Centre)
Your Trusted One-Stop Apple Service Center
❖Address : No.111, Botahtaung Pagoda Road, Botahtaung Tsp, Ygn.
❖ Find us on Google Map : https://goo.gl/XM0CGN
Open Monday-Saturday : 10 AM to7PM
❖Hotline : 09264441607 / 09264441608
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ဘယျနရောကပဲလာလာ Grab စီးလာရငျ ကသြငျ့ငှကေိုရှငျးပမေယျ့ iSure
iPhone ၊ iPad ၊ Mac အသဈဝယျခငျြလို့ပဲဖွဈဖွဈ သငျလကျရှိအသုံးပွုနတေဲ့ iPhone ၊ iPad ၊ Mac တဈခုခုဖွဈသှားလို့ ပွုပွငျခငျြရငျပဲဖွဈဖွဈ ဆိုငျတဈဆိုငျကိုတော့ မဖွဈမနသှေားရတော့မှာပါ။ နပေူမိုးရှာရာသီဥတုနဲ့ ကားလမျးတှပေိတျနတေဲ့အခါ ဆိုငျတဈဆိုငျကိုသှားဖို့က တျောတျောလေးစဉျးစားရပါတယျ။
အဲဒီလိုစဉျးစားရတာတှကေို အခုအခြိနျမှာခဏမထေ့ားလိုကျနိုငျပါပွီ။ သငျ့အတှကျ သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ ဆိုငျကိုလာနိုငျစမေယျ့ အစီအစဉျတဈခုကို iSure ကစတငျလိုကျပါပွီ။ iSure ကတော့ Apple Device တှနေဲ့ပတျသကျပွီး ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ One-Stop Apple Service Center တဈခုပါ။ Apple ရဲ့ Guideline အတိုငျး ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေိုယျတိုငျ ပွုပွငျမှုတှပွေုလုပျပေးမှာဖွဈတာကွောငျ့ ယုံကွညျစိတျခရြပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ Apple Device တှအေတှကျလညျး Accessory တှကေို iSure မှာဝယျယူလို့ရပါသေးတယျ။
အဲ့ဒီတော့ iSure ကိုသှားမယျဆိုရငျ Grab လေးငှားပွီး သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ထိုငျလိုကျသှားယုံပါပဲ။ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ဘယျနရေကပဲငှားငှား သငျ့ရဲ့နောကျဆုံးစီးနငျးခဲ့တဲ့ Drop Off မှာ iSure ဖွဈနရေပါတယျ။ သငျစီးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉျအတှကျ ကားခကသြငျ့ငှကေို Screenshot ရိုကျထားပါ။ iSure ကိုရောကျလို့ iPhone ၊ iPad ၊ Mac တဈခုခုဝယျပွီးရငျ ဒါမှမဟုတျ Apple Device ပွုပွငျတာလုပျပွီးလို့ ငှရှေငျးတော့မယျဆို သငျစီးလာခဲ့တဲ့ခရီးစဉျအတှကျ ကသြငျ့ငှေ Screenshot လေးပွနိုငျရငျ iSure က ယာဉျစီးခကို ကခြံရှငျးပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ Promotion အစီအစဉျကတော့ June 30th အထိပဲဖွဈပါတယျ။ Grab ရိုးရိုးပဲပါဝငျတာဖွဈပွီး Grab Taxi Plus မြားကတော့ ဒီ Promotion အစီအစဉျမှာ အကွုံးမဝငျပါဘူး။ iSure ရဲ့လိပျစာကိုတော့ အောကျမှာဖျောပွပေးထားပါတယျ။